Boqolaal dumar ah oo ‘qaaday uur’ been abuur ah - BBC News Somali
18 Jannaayo 2018
Lahaanshaha sawirka ALHASSAN SILLAH
Image caption Dumarka waxa ay yeesheen astaamaha uurka
Haweenaydan oo lagu magacaabo N'na Fanta Camara ayaa la sheegay in ay qof kasta ka qaadaysay lacag dhan $33 doolar oo ah lacag aad u badan marka loo eego daqliga dadka dalkaas oo bishii ku shaqeeya mushaar dhan $48 doolar.
Yaxya Jammeh oo gaaray dalka Equatorial Guinea
Midowga Afrika oo baaq ka soo saaray xaaladda cakiran ee Zimbabwe
NABY KEITA - Cayaaryahanka xulka Guinea iyo kooxda Red Bull Leipzig
Illaa 700 dumar ah oo da'doodu u dhaxayso 17 jir illaa 45 ayaa la rumeysanyahay in ay arrintan saamaysay.
Arrintan ayaa waxa ay muujineysaa in wali dadka Afrikaanka ah ay ku tiirsanyihiin dawada dhaqanka iyo dadka wax sanceeya. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 80% dadka Afrika ay ku tiirsanyihiin dawo dhireedka.
"Sanad ayaa laga joogaa illaa markii aan islaantan u tagnay, markii koowaad waxa ay na siisay caleemo iyo waxyaabo kale oo mantag naga keenay, muddo kadib caloosha ayaa na weynaatay" ayay tiri mid ka mid ah dumarkii banaanbaxay oo la hadlaysay wariyaha BBC-da Cali Silaax.